Teepee leh xardhan - Moi Mili
Teendhooyinka Moi Mili waa meel wanaagsan oo lagu raaxaysto oo lagu nasto ilmo kasta. Wareegtadayada leh qaab caadi ah ayaa laga tolay maro qaro weyn. Gabi ahaan waxaa lagu gooyaa suuf. Moodooyinka ku jira qaybtaan waxaa sida caadiga ah lagu jeexjeexay geedo yar-yar oo midabbadoodu u eg tahay meesha laga galo teendhada. Qurxintani waxay siisaa dabeecaddeena suugaanta.
Teepee wuxuu ku leeyahay daaqad dhanka bidix. Uluhu way jajaban yihiin oo waa la nuujiyaa, qaab dhismeedka oo dhan waxaa lagu xardhay xadhig qaro weyn leh. Uluhu alwaaxdu waxay ku qarsoon yihiin tunelada hoose ee hoostiisa. Teendhooyinka Nice waxay leeyihiin derbiyada 5 iyo saldhig fadhiga, taasoo ka dhigaysa inay ka xasilloon yihiin oo ka ballaaran yihiin teendhooyinka leh saldhig laba jibbaaran.
Waxaan soo saarnaa Poland, inta badan wax soo saarka asalka Polish. Waxaan daryeelaynaa faahfaahin kasta iyo tayo sare oo ah xirfad-shaqeedka iyo wax soo-saarka. Tipi wuxuu la imanayaa buug-gacmeed iyo dabool. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku raaxeysatid adduunkeena.
Teendhooyinka carruurta loogu talagalay "Dugsi bixin"
Teendhooyinka teendhooyinka "Miętowelove"